Kulan wacyigelin ah oo ku saabsan daryeelka Caruurta oo lagu qabtay magaaladda Buuhoodle (Sawiro + Cod) – Radio Daljir
Kulan wacyigelin ah oo ku saabsan daryeelka Caruurta oo lagu qabtay magaaladda Buuhoodle (Sawiro + Cod)
Diseembar 7, 2012 8:36 b 0
Buuhoodle, Dec7 Kulan uusoo qaban qaabiyey xafiiska Wasaarada horumarinta haweenka iyo arimaha Qoyska Puntland ee gobolka Cayn ayaa lagu qabtay guriga gobolka ee magaalada Buuhoodle,?
Kulankan oo ay kasoo qayb galeen, Haween, maamulka gobolka Taliska Bilyaska iyo bahda Saxaafadda ayaa ku saabsanaa wacyigelinta shaqaaqooyinka caruurta oo sanadkasta 16 maalmood laga xuso Puntland.
Isuduwaha Wasarada haweenka ee gobolka Cayn Adna Cali Axmed ayaa ka warbixisay kulankan maanta ,Iyadoo sheegtay in Wasaarada haweenku wacyigelinta sanadkan ay ku eegtay inay quudiso qoyaysas danyar ah oo caruur haysta.
Taliyaha saldhiga dhexe ee Buuhoodle Cabdilaahi Faragod ayaa ka hadlay ?munaasibada isagoo sheegay in caruur badan oo ku sugan Buuhoodle ay haysato dhibaatooyin waxbrasho ?la’aan ah taasoo sababtay in caruurtaasi dhibaato ku keenaan magaalada.
Caasha Jaamac Dhuux oo kamid ah Hooyooyinkii kasoo qayb galay shirka ayaa sheegtay in barnaamijyada noocan ahi muhiim u yihiin bulshada iyadoo wasaarada ugu baaqday in laga shaqeeyo arimahan oo kale.
Ugu danbayn waxaa shirka soo xidhay Taliyaha qabta bilyaska ee gobolka Cayn Maxamuud jaamca Cali,
Wacyigelinta 16-ka maalmood ee shaqaaqooyinka caruurta ayaa ah mid sanad walba lagu qabto magaalada Buuhoodle iyo goboladda Puntland.
Galmudug oo iska fogeysay eedo kaga yimid dhanka Puntland.
Galkacyo: Madaafiic laga soo ridey Galmudug oo lagu garaacay Xaafaadaha Garsoor iyo Israac (Dhegayso)